आज भदौ ८ गते आइतबार, हर्नुहोस तपाईको आजको राशीफल - A complete Nepali news portal based on news & views
८ भाद्र २०७६, आईतवार ०६:४७ August 25, 2019 Nonstop Khabar
वि.सं. २०७६ भदौ ८ गते आइतबार । इ.स. २०१९ अगस्ट २५। नेपाल संवत ११३९ गुँलागा । भाद्र कृष्णपक्ष । दशमी, २५:५९ उप्रान्त एकादशी ।उपप्रा. लक्ष्मीप्रसाद बराल (फलितज्योतिषाचार्य)
अवसर प्राप्त भए पनि आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। फजुल खर्च बढ्नेछ। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। वादविवादमा अघि नसर्नुहोला। दिउँसोदेखि नयाँ योजनातर्फ अग्रसर भइनेछ। तर समयमा जागरुक नबन्दा पछि परिनेछ। पहिलेका सहयोगी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्, ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर काम लिने चेष्टा गर्नुहोला। (नेपाली पात्रो)
प्रयत्न गर्दा व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टामा लाभ मिल्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। आम्दानी बढ्नेछ। रोकिएको काम बन्नेछ र जिम्मेवारी पनि बढ्नेछ। दिउँसोदेखि अवसरका लागि केही दौडधुप गर्नुपर्ला। व्यवसायमा थप लगानी आवश्यक पर्नेछ। भैपरी आउने समस्याले खर्च बढ्नेछ भने आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ। पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। (नेपाली पात्रो)
प्रतिस्पर्धी बढ्नाले समस्या थपिएलान्। तापनि स्रोतसाधन जुट्नाले काम बन्नेछ। लगानी बढाउनुपरे पनि नयाँ व्यवसाय थालनी हुनेछ। बलभन्दा बुद्धि लगाउँदा लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। दिउँसोदेखि विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन्। व्यापारको बहानामा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। आकर्षक उपहारले उत्साह जगाउनेछ। ज्ञान, कला र व्यक्तित्वमा पनि निखारता आउनेछ।
मौका आए पनि समयमा जागरुक नबन्दा पछि परिनेछ। लेनदेन सम्बन्धी हिसाबमा होसियार रहनुहोला। अग्रजहरूको सहयोगले केही काम गर्न सकिनेछ। तर गोपनीयता बाहिरिनाले काममा समस्या पर्न सक्छ। दिउँसोदेखि आफन्तबाट सावधानी अपनाउनुहोला। व्यसायमा काम बिग्रनाले केही दौडधुप गर्नुपर्नेछ। अनायासै साथीभाइ टाढिनाले एक्लोपना अनुभूति हुनेछ। (नेपाली पात्रो)
अब कक्षाकोठामा नै पूरा संसार अटाउँने